Somalia: Al-shabaab Oo Gacanta Ku Dhigtay Qaybo Kamid Ah Gobolada Somalila Iyo Jidka Iskuulka Xidha Kismaanyo &Muqdisho Oo Go-ay. - Wargane News
Home Somali News Somalia: Al-shabaab Oo Gacanta Ku Dhigtay Qaybo Kamid Ah Gobolada Somalila Iyo...
Al-Shabaab ayaa maanta la wareegtay deegaanka Leego oo ah marin muhiim ah oo isku xira Muqdisho iyo Baydhabo, kaddib markii saaka ay isaga soo baxeen Ciidamada AMISOM iyo ciidankii dowladda ee wehlinayay. Boqolaal dagalayahano oo ka tirsan Al-Shabaab, kuna hubeysnaa gaadiidka dagaalka ayaa gudaha u galay deegaanka Leego, wax yar kaddib markii ay ka baxeen Ciidamada AMISOM.
Dadka deegaanka ayaa isugu soo baxay waddooyinka, iyagoo arkayay dagaalyahano fara badan oo ka tirsan al-Shabaab oo ku dhawaaqayay Takbiirta (Allaahu Akbar), waxaa durbaba Al-Shabaab ay baaritaano ka bilaabeen saldhigii ay ka baxeen iyo xarumihii maamulkii deegaanka.
Wararka ayaa sheegaya in Guddoomiyihii deegaanka iyo ciidamadii ilaalinayay ay iyana iska baxeen, kaddib markii ay ka war heleen ka bixitaanka Ciidamada AMISOM.
Leego ayaa magaalada Muqdisho u jirta illaa 120KM, waxay u dhowdahay degmada Wanlaweyn, deegaankan ayaa ahaa mid isku xirayay Muqdisho iyo baydhabo, waxaana haatan muuqata in si rasmi ah ay u go’day isku xirka Muqdisho illaa Baydhabo oo xilliyada qaar marka ay ciidamada wadada ku safrayaan jidka loo geli jiray.
Labo sano ka hor ayaa saldhig Ciidamada Burundi ka degenaayeen Leego waxaa lagu qaaday weerar qaraxyo iyo dagaal toos ah, halkaasoo ciidanka Burundi looga dilay illaa kontameeyo askari, waxaana markii dambe lagu bedelay Ciidamo ka socday Uganda oo tan iyo sanadkii 2015 fariisin ku lahaa.